Ukwabelana akonelanga- Kutheni ufuna iSicwangciso sokuKhulisa uMxholo | Martech Zone
Kwakukho ixesha laxa ungayakha, babeza kuza. Kodwa yayiyiyo yonke into ngaphambi kokuba i-intanethi igcwaliswe kakhulu ngumxholo kunye nengxolo eninzi. Ukuba ubukhe wanxunguphala kukuba umxholo wakho awuhambi nje njengokuba ubuqhele ukwenza, ayilotyala lakho. Izinto zatshintsha nje.
Namhlanje, ukuba ubakhathalele ngokwaneleyo abaphulaphuli bakho kunye neshishini lakho, ngokuqinisekileyo kufuneka uphuhlise isicwangciso sokutyhala umxholo wakho uye kubantu abawudinga kakhulu-ngesicwangciso sokwandisa umxholo.
Kutheni uthetha kangaka ngomxholo?
Wonke umntu kunye nenja yakhe bayayazi indlela ekubaluleke ngayo okubhaliweyo kunye Umxholo obonakalayo kwezentengiso. Yeyona moto iphambili ehambisa umyalezo wakho kubaphulaphuli bakho, ngamagama, imifanekiso kunye nevidiyo ezenza imvakalelo kwaye zihambise abantu ukuba benze isenzo. Kwaye ngeNtsebenzo kuza uNguqu, olona lonwabo lukhulu kulo naliphi na ishishini.
Yonke into oyibeka phaya, ngaphandle kwesitishi [iiposti zebhlog, amabali e-Instagram, iileta zeendaba, iividiyo, njl. Njl. Phambi kwabaphulaphuli bakho zikunceda ukuba uhlale unomdla kwaye uzibandakanya nophawu lwakho. Inceda ukuba ungenise ingqalelo kwishishini lakho kwaye ngokuqhubekayo yandisa abaphulaphuli bakho njengebhlog.
Ke, ukudala umxholo kuyinto entle, ukuyipapasha kumaqonga awahlukileyo kukwalungile, kodwa kuya kufuneka uyikhulise ukuba ufuna ukufikelela kwinqanaba eliphezulu labantu.
Nazi iindlela ezimbalwa ezinamandla zokwakha isicwangciso sokukhulisa umxholo:
Intengiso ezihlawulweyo - Cinga ngeentengiso njengamaphiko angabonakaliyo ahambisa umxholo wakho kubude obukhulu. Uninzi lwamaqonga, kwezi ntsuku, sele enjalo hlawula ukudlala iinkqubo, ngakumbi i-Facebook. Akukho nto iphosakeleyo apha, lishishini, njengawe. Ukuba ungafaka i $ 1 kwaye ubuye $ 2, awufuni kudlala? Ukuhlawulela iintengiso ayenzelwanga kuphela injongo yokutyhala umxholo wakho phaya phambi kwabaphulaphuli bakho abakhoyo. Kukwalungele ngokuthepha kubaphulaphuli abatsha nokwandisa ukufikelela kwakho, ngaphaya kwempembelelo yakho.
Chaza ezinye iimveliso kunye nefuthe -Iinjongo apha kukwakha ubudlelwane kunye nentando elungileyo kunye neontanga kwi-niche yakho ngokwabelana ngomxholo wabo okanye ukumakisha xa kunokwenzeka. Oku kuyakubeka kwii-radars zabo kwaye kuya kubenza ukuba babenakho ukuphindisela xa kufika ixesha elifanelekileyo.
Buza abachaphazeli ukuba bangene -Enye yeendlela ezilula zokucofa abaphulaphuli abanempembelelo kukubabuza ukuba bafake igalelo kwizihloko ezithile. Endaweni yokuzama ukuba iposti yakho yeendwendwe ipapashwe kwiqonga labo okanye ubenze baqiniseke ukuba babelane ngesiqwenga somxholo kunye nabaphulaphuli babo, ungabathumela nge-imeyile bebuza uluvo lwabo ngesihloko kwi-niche yakho. Oku kuyakuthatha ixesha elincinci kwisiphelo sabo kwaye kuya kukhokelela ekwabelaneni kwakhona ngesiqwenga somxholo kunye nabaphulaphuli babo. Kwaye kuya kukunceda wakhe ubudlelwane kunye nokulunga ngendlela elungileyo. Kwakhona zama nje ukusebenzisa indlela ocinga ngayo ukuze ufumane ubunyani, ungagutyungelwanga kukujonga imveliso.
Sebenzisa i skracraper ubuchule! Ngamafutshane, le yindlela yokwakha ngaphezulu komxholo okhoyo okhoyo. Ngokusisiseko, wenza uphando olukhulu ngesihloko esithile, uqokelele idatha eninzi kangangoko unakho kwaye emva koko wongeze eyakho imeko ngesihloko kwaye wabelane ngombono wakho owahlukileyo kuyo yonke incoko. Xa ugqibile, thumela umxholo kubo bonke abanye abadali bokuqukethwe abakhankanywe emsebenzini wakho kwaye ucele ingxelo yabo kunye nokwabelana nabaphulaphuli babo.
Phinda ubeke umxholo wakho -Unemithwalo yeebhlog ezibalulekileyo ezihleli kwindawo yakho? Banike isiqalo esitsha ngokudibanisa isikhokelo esihlala sihlaza usebenzisa umxholo wakho. Emva koko yisebenzise njengemagnethi yesizukulwana esikhokelayo yokufumana ingqalelo eyongezelelweyo kunye nokwazisa ngebrand. Oku kuyakuvumela ukuba uphinde usebenzise umxholo okhoyo okuthathe ixesha kunye nezixhobo ukwenza kwaye ucofe abaphulaphuli abatsha.
Ukuguqula iiposti zebhlog zibe zizithuba zemidiya yoluntu ezinokuluma kunye nezicatshulwa ezinokuthi zenziwe
Ukwenza ividiyo emfutshane usebenzisa izixhobo ezinje Lumen5 or Infi ukwabelana ngeengcebiso ezikhawulezayo
Ukuthatha iaudiyo kumxholo wevidiyo yakho kwaye uyijike ibe yipodcast
Ekugqibeleni, kufuneka ucwangcise kokubini ukudala kunye nokusebenzisa umxholo wakho. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ucinge ngobuchule kwaye utyhale owona mxholo wakho uphambili phambi kwabo kunokwenzeka ukuba bayidinge. Isitshixo nantsi ukufaneleka.
Akukho nto ibuhlungu njengokudala isiqwenga somxholo esixabisekileyo kwaye usichaze ngokuchasene nabaphulaphuli abangalunganga. Vumela le ndlela ikhokele uyilo lwakho lomxholo kunye nesicwangciso sokukhulisa.
Qiniseka ukuba uyaziqonda nzulu iingxaki zabaphulaphuli bakho kwaye uyacaca kwisisombululo sakho. Emva koko, nikela ingqalelo apho ingqalelo yabaphulaphuli bakho ijolise khona. Emva koko fakela kula maqonga usebenzisa umxholo ofanelekileyo okwahambelana neenjongo zakho zeshishini kunye nomsebenzi.
Wenza njani ngoku kunye nokukhuthaza umxholo wakho? Kwaye zeziphi kwezi ndlela zokukhulisa onqwenela ukuzama kuqala? Sazise iingcinga zakho kwizimvo ezingezantsi!
tags: iimvelisoIntsebenziswanoukukhulisa umxholoukuphindaphinda umxholoAbathinteliintengiso ehlawulweyohlawula ukudlalaukuphindaphindaumxholo ophindaphindiweyoskyscraper Inkqubo